श्रीमान्का अधुरा सपना पूरा गर्न मेरो उम्मेदवारी
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू प्रचारप्रसारमा जोडतोडले लागेका छन् । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश सभा सदस्य (ख) का तत्कालीन सांसद उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनमा परी निधन भएपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट वलीकै श्रीमती विमला खत्री (वली) र नेपाली कांग्रेसबाट केशव आचार्यसहित अन्य राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी १४ जनाले उम्मेदवार छन् । जसमा राप्रपाको तर्फबाट भुपाल रावत, साझा पार्टीका तर्फबाट शिवकुमार चौधरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तर्फबाट धनराज सुनार, नेमकिपाबाट सुरेश परियार, राप्रपा संयुक्तबाट छोटिलाल थारु, नेकपा मालेबाट हरिप्रसाद डाँगी, समाजवादी पार्टीबाट डिल्लीबहादुर डाँगी, मंगोल नेशनल पार्टीबाट घनश्याम चौधरी, लोकतान्त्रिक पार्टीबाट झरेन्द्रबहादुर खत्री, नेका (बीपी) बाट दीपककुमार धिताल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा गोविन्द बिसी र टीकाराम आचार्य छन् । तर मुख्य प्रतिस्पर्धी भने नेकपा र नेपाली काँग्रेस नै देखिएका छन् । यसै सन्र्दभमा दाङस्थित कारोबारकर्मी अमरराज आचार्यले प्रदेश सांसदका उम्मेदवारद्वय वलीसँग गरेको कुराकानीको सार :
श्रीमान्को मृत्युपछि नेकपाले तपाईंलाई उम्मेदवार बनाएको छ, तपाईं पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म खुसी छु । मलाई पार्टीले उचित सम्मान गरेको छ, यसप्रति म निकै आभारी छु । श्रीमान्ले देखेका धेरै सपना थिए, ती सपना पूरा गर्ने अवसर मलाई दिनुभएको छ, यो मेरा लागि ठूलो अवसर पनि हो । यो अवसर पाउनु नै मेरो लागि नयाँ अनुभव भएको छ । धेरै जनताले साथ दिनु भएको छ । श्रीमान्ले पश्चिम दाङको विकासका लागि देखेको सपना पूरा गर्नका लागि मेरो हातमा हात मिलाउन आउनुभएको छ, यसले मलाई धेरै हौसला बढाएको छ ।
श्रीमान्ले देखेका सपना पूरा गर्ने अवसर पाएँ भन्नुभयो । खास के थिए श्रीमान्ले देखेका सपना ?
मैले श्रीमान्ले सबै जनताका प्यारो नेता स्व. उत्तरकुमार ओलीले पश्चिम दाङका लागि बनाएका योजनाहरू नजिकबाट हेरेकी थिएँ । उहाँले पश्चिम दाङका लागि धेरै विकासका काम गर्नुभएको छ भने आगामी दिनमा गर्ने विकासका योजनाहरू मेरै अगाडि बनाउनुहुन्थ्यो । उहाँको सडकलाई प्राथमिकता दिएर दुई वर्षभित्र प्रमुख सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने, सहायक सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, तुलसीपुर–सुर्खेत सडकलाई आगामी एक वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने, ढोलपुर–मलै–क्युरेनी–बञ्चरे सडकलाई ग्राभेल गर्ने, ट्याङ खोला–जौवारी–बन्चरेसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने उहाँको योजना थियो ।
यतिमात्रै होइन, प्रत्येक वडा कार्यालयदेखि मूल सडकसम्म २ वर्षभित्र सडक कालोपत्रे गर्ने, हापुरे–रामबजार–घट्टेखोला हुँदै शारदा नदीसम्मको सडकलाई कालोपत्रे गर्ने, पुरन्धाराको झरना र धाँगे छहरालाई आधुनिक बनाउँदै पर्यटनको गन्तव्यस्थल निर्माण गर्ने, मठ, मन्दिर, थारु भुइँह्यार र चर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्दै संरक्षण गर्ने, सुइकोट, मनकामना मन्दिरजस्ता स्थललाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लगायतका थुप्रै योजना रहेका थिए । अब म उहाँले देखेका यी सपना पूरा गर्ने दौडमा छु । मेरा आगामी एजेन्डा पनि यी नै हुन् । त्यसैले जनताले मलाई हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्न अनुरोध पनि गर्छु ।
तपाईंले स्व. उत्तरकुमार ओलीले गर्ने गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेकी थिएँ भन्नुभयो, अहिलेसम्म उहाँले गरेका काम के–के थिए, याद गर्नुभएको छ ?
मैले सबै विकासका कुरा याद गरेकी छु । पश्चिम दाङको विकासका लागि उहाँ हामी घरपरिवारभन्दा बढी जनताका लागि हिँड्नुहुन्थ्यो । उहाँले एउटा घरको मात्रै समस्याभन्दा समग्र पश्चिम दाङको समस्यालाई समाधान गर्ने गर्नुभएको थियो । जनताका दुःखमा उहाँ प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या ठान्नुहुन्थ्यो । विकास निर्माणका कार्यमा पनि उहाँ आफ्नै अग्रसर हुनुहुन्थ्यो । आफू सांसद हुँदा मात्रै नभई सांसद नहुँदा पनि विकास निर्माणमै ध्यान दिनुहुन्थ्यो । उहाँकै पहलमा हापुरेमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ मा मदन भण्डारी रंगशाला निर्माणको काम, कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदान दिनुका साथै मुख्यमन्त्री स्मार्ट कृषि कार्यक्रममार्फत किसानहरूलाई व्यावसायिक र आधुनिक कृषितर्फ उन्मुख गराउने काम, पुरन्धारा–कोहलपुर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम, जनताको सर्वसुलभ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दै विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने काम, पुरन्धारा झरना पुग्ने सडक निर्माणका साथै झरनामा पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम, थारु संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटकीय आकर्षणका लागि थारु संग्रहालय निर्माण र दंगीशरण पार्कको सुरुवात गर्ने काम, श्रीमणी मार्ग र बालापुर–देविस्थान सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको गर्ने काम, विकट गाउँ गँगटेसम्म विद्युत् विस्तारको काम, बबई गाउँपालिकाका सबै वडा छुने गरी मनमोहन चक्रपथको काम, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने काम, बूढाडावर–खैरेनी–जुम्लेकुला र गाउँपालिकाका मुख्य सडक स्तरोन्नति गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ ।
तपाईंले चुनाव जित्ने आधारहरू के–के छन् ?
मेरा जित्ने आधार भनेका मेरा विकासका एजेन्डा नै हुन, जुन एजेन्डाहरू मेरो श्रीमान्ले मेरो जिम्मामा छोडेर जानुभएको छ । पश्चिम दाङको विकासमा नेकपाले खेलेको भूमिका, उत्तरको सपना पूरा गर्ने तीव्र चाहना नै मेरा जित्ने आधार हुन् । विकास र समृद्धिप्रतिको स्व. उत्तरको समर्पणलाई जनताले अत्यधिक मतले अनुमोदन गर्नुभएको थियो । जनताको सुख र दुःखमा हरदम साथमा रहने, विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेकै कारण जित्नुभयो । तर जनताले सोच्दै नसोचेको घटनापछि म र हाम्रो परिवार मात्रै होइन, सिंगो पश्चिम दाङलाई नै निराश बनाएको छ ।
तर अब त्यो निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्ने जिम्मा मेरो काँधमा आएको छ । दाङको कर्णालीका रूपमा परिचित पश्चिम क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन उहाँले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ, अब उहाँको योगदानलाई सम्मान गर्दै जनताले उहाँका अधुरा सपना पूरा गर्न मलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ । मैले अघि नै भने मैले मेरो श्रीमान्ले जुन सपना देख्नुभएको थियो, ती सपना मैले पूरा गर्ने प्रण लिएकी छु । किनकि मेरै कारणले उत्तरकुमार ओली अहिले यो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको थियो । मैले साथ नदिएको भए उत्तरकुमार ओलीले पश्चिम दाङका लागि अहिले जुन योगदान दिएर यस क्षेत्रबाट निर्वाचित मात्रै नभएर, यस क्षेत्रकै लोकप्रिय हुनुभएको छ, त्यति हुनुहुने थिएन । उहाँको एजेन्डा सफल बनाउन मैले पनि एउटा श्रीमती मात्रै नभएर यस क्षेत्रको सक्षम नागरिक भएको हैसियतले पनि धेरै समर्थन गरेकी थिएँ ।
चुनाव प्रचार–प्रसार अभियानलाई कसरी तीव्र बनाउनु भएको छ ?
हामीले चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाएका छौं । ठाउँ–ठाउँमा कोणसभा, टोल–टोलमा कोणसभा, जनताको घरदैलोमा पुगेर भोट माग्ने काम भएका छन् । यसलाई तीव्रताका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौं । अहिले हामी पश्चिम दाङवासीलाई परेको शोकलाई शक्तिमा बदल्न पनि अभियानलाई तीव्र बनाउँदै लगेका छौं । चुनावमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, गाउँ, वडा, टोल कमिटीका साथै यहाँका सबै जनताले प्रचार–प्रसारमा सहयोग गर्नुभएको छ ।
मलाईं तपाईंको पत्रिकामार्फत आफ्ना भनाइ राख्न दिनुभयो । तपाईं र पत्रिकालाइ पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । म यस क्षेत्रका जनतालाई यहाँको समृद्धि र विकासका लागि उत्तरले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, त्यो भूमिकालाई कमी हुन दिनेछैन, त्यसका लागि मलाई यस क्षेत्रका नागरिकले विजयी बनाउनसमेत आग्रह गर्छु ।